‘किन मेकअप नगरेको’ भन्दै हप्काएपछि… « purwanchal National Daily
‘किन मेकअप नगरेको’ भन्दै हप्काएपछि…
एजेन्सी , नेपालमा हरेक वर्ष हुने ‘मिस नेपाल’ प्रतियोगितालाई लिएर बारम्बार विवाद भइरहन्छ । मिस नेपाललाई महिलाको रुप बेच्ने कारखाना भन्दै कतिपय महिलाले नै विरोध गर्ने गर्छन् ।
यतिबेला भने मिस नेपाल अर्कै कारणले चर्चामा छ । कारण हो, मिस नेपालमा सोधिएको एउटा प्रश्न ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा डाक्टर कल्याणले आफ्नो फेसबूक पेजमा एउटा भिडियो सार्वजनिक गर्छन् । उक्त भिडियोमा उनले लेख्छन्-‘मिस नेपाल अडिसन, यो क्लिप हेरेर मनमा आएको कुरा तल लेख्नुहोला ।’
क्लिपमा के छ ?
प्रतियोगीले आफ्नो परिचय दिन्छिन् – ‘मैले ब्याचलर डिग्रीमा कम्युटर इन्जिनियरिङ गरिरहेकी छु । म अहिले सेभेन्थ सेमेस्टरमा पढिरहेकी छु ।’
मिस नेपालकी सहभागी अस्मिता महर्जनलाई लगत्तै निर्णायक रचना गुरुङले प्रश्न सोध्छिन् – ‘तिमीले किन मेकअप नगरी आयौ ?’
प्रतियोगीले इमान्दारपूर्वक मुस्कुराउँदै भन्छिन् – ‘वास्तवमा मलाई मेकअप गर्न नै आउँदैन ।’
निर्णायकले रुखो आवाजमा अर्को प्रश्न गर्छिन् – ‘मेकअप गर्न नआउने भए किन मिस नेपालमा आएको ? अहिलेको एक्काइसौँ शताब्दीमा मेकअप नै गर्न नआउने मान्छे मिस नेपालमा भाग लिन आएर ‘मिस नेपाल’को गरिमालाई कमजोर बनाउन खोजेको ?’
प्रतियोगीले उत्तर दिन्छिन् – ‘म सिक्नेछु ।’
निर्णायकले अन्तिम निर्णय सुनाउँदै भन्छिन् – ‘तिमी सिकेर आऊ । तिमीले मिस नेपालको प्लेटफर्मलाई अनादर गर्‍यौ ।’
सहभागीले चुपचाप मुस्कुराएर नै यो सबथोक बेहोर्छिन् ।
त्यसपछि निर्णायकको प्रश्न प्रतियोगीको खुबीमा होइन कि, आँखामा लगाएको चश्मातिर ढल्किन्छ । उनले सोध्छिन् – ‘तपाईंको आँखामा लगाएको चश्माको पावर कति हो ?’
प्रतियोगीले उत्तर दिन्छिन् – ‘- ५ ।’
निर्णायकले अर्को प्रश्नको झटारो हान्छिन् – ‘तपाईं कन्ट्याक लेन्स प्रयोग गर्नुहुन्छ ?’
प्रतियोगीले भन्छिन् – ‘गर्छु ।’
फेरि निर्णायकको प्रश्न आउँछ – ‘किन नलगाएको त ?’
प्रतियोगीले जवाफ दिन्छिन् – ‘म स्कुटीमा आउनुपर्ने थियो । र, काठमाडौंमा धूलो बढी हुने कारणले चश्मा प्रयोग गरेकी हुँ ।’
यो भिडियो क्लिप सार्वजनिक भएलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले मेकअपलाई मिस नेपालमा अनिवार्य बनाएको र मेकअप गर्न नजान्ने सुन्दरीहरुलाई अपमान गरेको भन्दै युवतीहरुले नै विरोध गरिरहेका छन् ।
भिडियोमा कतिले निर्णायकका तर्फबाट मेकअपलाई लिएर प्रश्न सोध्ने रचना गुरुङ शर्माको विरोध गरेका छन् ।
कतिपयले मेकअप गरेकी रचनाभन्दा प्रतियोगी नै ‘राम्री’ देखिएको भन्दै निर्णायकको मजाक उडाएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको यो भिडियोमा मेकअप नगरेर मिस नेपाललाई अनादर गरेको आरोप समेत लगाइएको छ । भिडियो फुटेज सार्वजनिक भएपछि मेकअपलाई नभएर बौद्धिकतालाई सम्मान गर्नुपर्ने धारणा धेरैको छ । उक्त भिडियो फुटेजलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा निरन्तर विरोध भइरहेको छ । विरोध गर्नेमा धेरै युवापुस्ता नै बढी छन् ।